Ikozvino inowanikwa yechitatu beta yevanogadzira iyo nyowani Apple anoshanda masystem | IPhone nhau
Beta yechitatu yevagadziri veApple masystem anoshanda ave kuwanikwa
Vhiki mbiri mushure mekutanga kweiyo wechipiri beta yeApple mashandiro matsva, Beta yechitatu yevagadziri yave kuwanikwa. Ichi ndicho chechitatu chiitiko chikuru chewatchOS 8, tvOS, iOS uye iPadOS 15, pamwe neMacOS Monterey, iyo inosanganisira maficha nyowani uye optimizations nechinangwa chekuwana yakagadzikana vhezheni yayo yepamutemo kuvhurwa mukudonha. Mune ino kesi, kune chete nhau dzevagadziri, chirongwa cheveruzhinji beta hachina kugashira chero chekuvandudza, kunyange zvichitarisirwa kuti vachachigamuchira mumazuva mashoma anotevera.
1 Ngatigamuchirei wechitatu beta yeTVOS, iOS, iPadOS 15, uye watchOS 8.
2 Maitiro ekuisa aya ekuvandudza betas pane zvishandiso
Ngatigamuchirei wechitatu beta yeTVOS, iOS, iPadOS 15, uye watchOS 8.
iOS uye iPadOS 15 yakarova yechitatu beta ye vatadzi nerwendo rurefu rwakaitwa uye rwekufanirwa kuitwa. Nekudaro, kuchine shanduko dzisingagare mushe muchiitiko chevashandisi senge kugadzirisazve kweSafari. Ndokusaka basa richienderera mberi nekubatanidza, kugadzirisa uye kugadzirisa shanduko idzi kuti uwane kuzadzikiswa kwakazara musoftware. Pasi pekuvaka kodhi 19A5297e Beta yechitatu yevagadziri veIOS uye iPadOS 15 iri kuuya.
Saizvozvo, nekodhi 19A5297e inouya yechitatu beta ye WatchOS 8. Iyo inoshanda sisitimu inoenda isingaonekwe nevana vayo vakanyanya asi yehukuru hwakadzika. Zvitsva zvitsva zvine chekuita neaya mabara, iyo yekurara app ine mweya wekufema kuongorora, nezvimwe zvakasanganiswa.
Safari muIOS 15, idzi ndidzo nhau dzayo pa iPhone uye iPad
Chekupedzisira, isu tinogamuchirawo yechitatu beta yeTVOS 15 iyo kuiswa kwayo kwakasiyana nemamwe madivayiri. Kuisa iyi yekuvandudza inofanirwa kuve musimudziri uye kumisikidza yakatarwa nhoroondo kuburikidza neXcode pane Apple TV iri mubvunzo. Iyi yekuvandudza inounza mashoma mashoma maficha: SharePlay, kugona kubatanidza maviri HomePod mini sekuburitsa, nyowani madimendi zvikamu mukati, nezvimwe.
Maitiro ekuisa aya ekuvandudza betas pane zvishandiso
Panyaya ye tvOS 15 zvinodikanwa gadza yakatarwa yekuvandudza purogiramu kuburikidza neXcode pane Apple TV uye woenderera mberi nekugadziriswa kwekugadzirisa.
Muchiitiko chewatchOS 8, zvinodikanwa kuve neiyo iOS 15 beta yakaiswa pane yako iPhone uye, gare gare, kugadzirisa iyo inoshanda sisitimu kubva kuWatch app. Kana iwe uine yechipiri beta yeIOS uye iPadOS 15 yakaiswa, kuisa iyo yetatu beta ingo svikira Software Zvidzoreso mune Zvirongwa uye enderera kune kumisikidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Beta yechitatu yevagadziri veApple masystem anoshanda ave kuwanikwa
Rockley's Isina-Inopisa Ropa Shuga Yekuyedza Chikamu
Maitiro ekuona iyo Tokyo 2020 Olimpiki Mitambo yemahara